Baaq ka so baxay kulankii SSE ee ka dhacay LYON | Somaliland.Org
Baaq ka so baxay kulankii SSE ee ka dhacay LYON
April 27, 2010	Taariikh: 26.04.2010 Summad: SSE322125042010
Baaq Baaq ka so baxay kulankii SSE ee ka dhacay LYON
Ururka isku xidha Jaaliyadaha Somaliland ee Yurub (SSE) ayaa Shirweynihiisii 7aad ku yeeshay sannadkan magaalada Lyon ( France ) taariikhdu markay aheyd 16kii ilaa 18kii Abriil 2010. Kullankan oo ku dhacay jawi aad u qurux badan isla markaana fursad weyn u ahaa ururradii ka soo qayb galey inay isku weydaarsadaan macluumaad fara badan oo la xidhiidha wixii waxqabad iyo khibrad ahaa. Gebogabadii kulanweynaha waxa si guud loo go’aansadey in muddo toddobaad gudihii ah lagu soo saaro baaq farriin ah oo lagu soo ururiyay talooyinkii ergooyinku soo jeediyeen muddadii shirku socday oo ku wajahan Somaliland, lana xidhiidha duruufaha ku xeeran ee ay ka mid tahay doorashada inagu soo fool leh ee la filayo inay qabsoonto bisha Juun.
Doorashada Somaliland iyo dareenka SSE
Ugu horreyn kulanka SSE ee ka dhacay magaalada Lyon wuxuu si diiran oo kal iyo laab ah u soo dhoweeyay go’aanka guddiga doorashadu ku muddeeyeen qabsoomida doorashada oo ku beegan bisha Juun. Urur ahaan waxa aanu guddiga doorashooyinka la garab taaganahay taageero aanu ugu hayno mas’uuliyadda culus ee ay dhabarka u riteen, taasoo aanu u rajaynayno in gudashadeeda Ilaahay u sahlo.
Madasha kulanka oo ay ka soo xaadireen ergooyin ka kala socdey sagaal waddan oo Yurub ah waxa si cad loogu muujiyey ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay in waddanka Somaliland ay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah oo ka madhan musuqmaasuq iyo mugdi keeni kara khilaaf hor leh oo Somaliland u horseedi kara dib-u-dhac aan loo baahneyn.
Ergada kulanku waxay si faahfaahsan u xuseen sida beesha caalamku ay indhaha ugu hayn doonaan doorashada bisha Juun la filayo inay ka dhacdo Somaliland, sidaa daraadeedna ay tahay arrin mudnaanteeda leh sidii loo fulin lahaa doorasho natiijadeeda aanay ka dhalan wax khilaaf ah oo lagu kala duwanyahay.
Si haddaba loo helo doorasho xaq ah oo ku dhisan caddaalad waxa uu Ururka SSE uu ku talinayaa arrimaha soo socda:
1. Ugu horreyn annagoo u hanweyn guddiga doorashada hawsha iyo mas’uuliyadda ay ummada reer Somaliland u qaadeen ayaanu kula dardaarmaynaa inay noqdaan kuwa ku sugnaada dhexdhexaadnimada ay yihiin isla markaana noqda kuwa la yimaadda dulqaad iyo adkaysi ku wajahan duruufaha adag ee soo waajihi doona wakhtiga doorashada. Sidoo kale waxa aanu ka codsanaynaa guddiga doorashada inay dadaalkooda iyo kartidooda isugu geeyaan dhammaystirka hawlaha lagama maarmaanka u ah qabsoomida doorashada si ay u dhacdo doorasho qabashadeeda lagu kalsoonyahay.
2. Xukuumadda Somaliland oo iyadu huwan maamuuska dowladnimo ee Somaliland waxaanu si gaara uga codsanaynaa inay xoogga saaraan dhaqan gelinta xeerka anshaxa doorashada oo u hoggaansanaantiisu ay sahlayso inay qabsoonto doorasho ku salaysan kalsooni iyo wadashaqeyn dhexmara ururada ku tartamaya doorashada. 3. Ciidanka Somaliland ee Booliisku ka mid yahay ayaanu ka rajaynaynaa inay hawlaha doorashooyinka ka geli doonaan kaalinta wax-ku-oolka ah ee ay u hayaan shicibweynaha reer Somaliland.
4. Dhammaan xisbiyada ku tartarmaya doorashada ayaanu iyaga laftooda kula dardaarmaynaa inay si wadajir u xurmeeyaan dhexdhexaadnimada guddiga doorashooyinka isla markaana ay ka dhowrsoonaadaan inay la yimaadaan wax farogelin ku ah hawlaha gaarka ay u leeyihiin guddiga doorashooyinku.
5. Sidoo kale xisbiyada qaranka waxaanu ku guubaabinaynaa in ay u hoggaansanadaan xeerka anshaxa doorashada ee saddexda xisbi qaran si wadajir ah ay u saxeexeen.
6. Dhammaan golayaasha kale ee xukuumadda ayaanu ka filaynaa inay waardiye fiican ka noqdaan sidii ay waddanka uga qabsoomi lahayd doorasho ku dhacda jawi fiican oo ka dheer mugdi iyo musuqmaasuq isla markaana ay ka shaqeeyaan suulinta wax kasta oo carqalad iyo culeys ku noqon kara sidii loo qaban lahaa doorasho hufan oo si caddaalad ah ku qabsoonta.
7. Warbaahinta Somaliland oo aanu dareensanahay kaalinta muga leh ee ay kaga jiraan maraaxisha kala duwan ee wakhtiga doorashada hadday tahay wakhtiga ololaha iyo u kuur gelida habka doorashadu u socoto iyo weliba soo tebinta natiijada doorashada ayaanu ka filaynaa inay si xilkasnimo leh oo dhexdhexaadnimo ah u shaqeeyaan isla markaana ka qayb qaataan in doorasho hufani ay ka dhacdo Somaliland, maadaama ay gacanta ku hayaan mid ka mid ah tashiilaadka ummada lagu wacyi geliyo.
8 Ururka SSE wuxuu u arkaa in waxa keliya ee doorashadeenna dhammaystiri karaa uu yahay caddaalad, taasoo aasaas iyo tiir adag u ah ku qanaca natiijo la isku raacsanyahay oo ah waxa maanta indhaha caalamku ay dhowrayaan.
Shirweynihii Lyon waxa kale oo ka soo baxay talooyin guud oo ku aadan sidii loo adkeyn lahaa ama loo xoojin lahaa muujinta jiritaanka Somaliland oo aad moodo in si aad ah aan loogu baraarugsaneyn. Waxa dhammaan shicibweynaha reer Somaliland mid qurbo ku nool iyo mid waddankii ku noolba looga baahanyahay u hawgalka muujinta Somaliland iyo kor u qaadida magaca Somaliland, gaar ahaan dadka reer Somaliland ee qurbaha ku nool. Kulanku wuxuu aqoonsaday in arrinkani yahay mid muhiim u ah jiritaanka iyo aqoonsiga Somaliland. Qof kasta oo ku nool waddanka dibaddiisa waa safiir ama waxa uu wakiil ka yahay waddankiisa, waana waajib in qaddiyada Somaliland laga dhaadhiciyo dadka aan la noolnahay, waana in dhallaanka lagu tarbiyeeyo taariikhda uu waddanku leeyahay, si markaa shaacinta iyo muujinta waddanku ay u noqoto mid xooggan.
Ururada ka soo qayb galey kulanka waxay tilmaameen sida ay mahuraan u tahay in la helo isku xidhnaan adag oo dhexmara ururada qurbo jooga iyo waddankooda. Waxaana la tilmaamay baahida dhabta ah ee loo qabo arrinkan si looga wada shaqeyn karo horumarka iyo iskaashiga labada dhinac. Sidoo kale waxa laga dhawaajiyay muhiimmadda ay leedahay in xukuumadda Somaliland arrinkan siiso mudnaantiisa, maadaama qurbo jooga Somaliland uu kaalin wax-ku-ool ah kaga jiro horumarka waddanka.
Ugu dambeyntii ururadu waxa kale oo ay talo ku soo jeediyeen baahida loo qabo in ururada Somaliland ay xoojiyaan awoodda iyo kartida waxqabadkooda iyo sida ay muhiim u tahay inay horumariyaan tayadooda waxqabad. Waxa la xusay in loo baahanyahay in ururadu ay kordhiyaan kala faa’iideysiga iyo aqoon korodhsiga dhexdooda si markaa aqoonta iyo waayo aragnimada ururadu ay u kobocdo. Waxa aad loogu dheeraaday sida ay muhiim u tahay xoojinta wada shaqeynta iyo iskaashiga ururada dhexdooda. Waxa la xusay in lagu jiro wakhti adag oo u baahan inay ururadu gacmaha is qabsadaan isna taageeraan si markaa ay u helaan fursad ay si fiican wax ugu qaban karaan. Waxa kale oo la xusay baahida loo qabo in ururada qurbo jooga Somaliland ay ku muuqdaan goobaha muhiimka ah ee la xidhiidha beesha caalamka si ay xog-ogaal ugu noqdaan hay’adaha caalamka kaalinta ay kaga jiraan Somaliland iy Soomaaliya oo ah labada dal oo kala duwan. Baaqan oo koobaya talooyinka laga soo jeediyay kulanka ayaa faahfaahintoodu ay ku soo bixi doontaa warbixinta kulanka oo dhowaan soo bixi doonta. Ilaahay ayaynu ka baryaynaa inuu xaqa iyo wanaaga ina garansiiyo, Alle ayaa mahad leh, Guddiga fulinta Post navigation
Previous PostXaflad Dhidibada Loogu Taagay Urur Samafal oo Loogu Magac-daray Marxuum Cali MaarshaalNext PostWAR-SAXAAFADEED : XISBIGA KULMIYE OO MAGACAABAY GUDDIGA OLOLAHA DOORASHADA EE QURBOJOOGGA	Blog